Asphalt 5, Gameloft wuxuu u ciyaaraa si xoogan | Androidsis
Asphalt 5 waa ciyaar orod baabuur 3D ah oo ka mid ah Shirkadda Gameloft. Gameloft Hadaad xasuusato, bilo kahor wuxuu cadeeyay in Suuqa Android Faa'iido ma lahayn oo waxay ka fekerayeen joojinta horumarka Android. Maalmo ka dib way ka noqdeen oo waxay ku dhawaaqeen inaan dhowaan war helayno.
Waxay umuuqataa in riwaayadahaas qaarkood qaarkood ay gaarayaan Suuqa Android. Shaki la'aan, shirkadan horumarinta softiweerku waa tan ugu fiican xagga horumarinta ciyaarta tayo ahaan iyo tiro ahaanba. Waxaan rajeyneynaa cayaaraha tayadaani inay soo socdaan.
Asphalt 5 Ma ahan lacag la'aan, waxay ku kacayaan € 6,99 laakiin runtii waxay leedahay muuqaallo muuqaal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Asphalt 5, Gameloft wuxuu u ciyaaraa si xoogan
Aan aragno haddii ay helayaan toogashada ay u sii daayeen iPhone-ka
Ku jawaab zonzamas
Waxaan weydiinayaa maya, sidee bay ku samaynayaan arinta meesha maadaama caynkan oo kale uu culeyskiisu ka sareeyo 10, 20 ama ka badan MB sida iphone ku jira oo gaaraya 400 MB, taas oo ah, khaldanaanta 140 MB ee Milestone I dhig 2 kulan oo kuwaan ah waxaana iga dhamaanaya qol badan.
ama u fur si aan u sugno cusbooneysiin noo oggolaaneysa inaan adeegsanno SD
Miyaanay ahayn wax shaki ku jiro sida onkodka oo kale? Ooyrooyinka aad qaadanaysid iyo kuwa wax dumiyaba.
Ku soo jawaab badda
aabbo maxaan mar hore u ciyaaraa
Waxaan joogaa heerka 21